Wararkii u dambeeyay doorashada Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya - Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii u dambeeyay doorashada Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya
Wararkii u dambeeyay doorashada Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya
Doorashadii Gobolka Ismaamulka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa saaka bilaabatay, kaddib markii ay dhagaha ka fureysteen baaqa dowladda dhexe ee ahaa in aan la qaban karin doorasho.
Shacabka Gobolka Tigray ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha loo asteeyay cod bixinta, iyadoo dadku ay codkooda dhiibanayeen, kuna ridayeen sanaadiiqda.
Xisbiga TPLF ee Tigray oo muddo dalka Itoobiya ka talinayay ayaa waxay ku hanjabeen in dhibaatada ay sii baahi doonto, haddii dowladda dhexe ay hor-istaagto doorashada Ismaamulka Tigray-ga.
Doorashada guud ee dalka Itoobiya ayaa dib loo dhigay, iyadoo muddo sanad ah loo kordhiyay Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed, ahaatee tallaabadaas ayaa dhalisay xiisad siyaasadeed oo sababay rabshado dad fara badan ku dhinteen, waxaana xabsiga la dhigay xubno ka tirsan mucaaradka.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo wajahaya cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah, ayaa ku tilmaamay doorashada Ismaamulka Tigray ay tahay mid sharci darro ah oo Guddiga doorashada oo kaliya ah uu doorasho qaban karo.
Xisbiga TPLF iyo Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa muddo waxaa u dhaxeeyay khilaaf siyaasadeed, tan iyo markii TPLF xukunkeeda meesha ka baxay, is bedelo siyaasadeed ka dhaceen Itoobiya labo sano ka hor.